Australiya waxay dib u furtay xudduudaha 18 bilood ka dib markii la karantiilay COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Australia » Australiya waxay dib u furtay xudduudaha 18 bilood ka dib markii la karantiilay COVID-19
Airlines • Airport • Wararka Australia • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Australiya waxay dib u furtay xudduudaha 18 bilood ka dib markii la karantiilay COVID-19.
In kasta oo xudduudaha caalamiga ah loo furay dadka Australiyaanka ah ee ku nool gobollada Victoria iyo New South Wales (NSW) iyo Magaalo-madaxda Australia, waddanku weli wuu u xiran yahay dalxiisayaasha ajnabiga ah, marka laga reebo kuwa ka yimid deriska New Zealand.
Dowladda Australiya waxay la timid mid ka mid ah jawaabihii ugu adkaa ee masiibada, iyadoo xirtay xuduudaheeda caalamiga ah 18 bilood ka hor.
Duulimaadyo caalami ah oo ka yimid Singapore iyo Los Angeles, Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ku degay Sydney.
Ilaa 1,500 oo rakaab ah ayaa la filayay inay u duulaan Sydney iyo Melbourne inta lagu jiro maalinta ugu horreysa ee xannibaadaha la fududeeyay
Muwaadiniinta Australiyaanka ah ee si buuxda loo tallaalay ayaa mas'uuliyiinta dowladda Australia ay si xor ah ugu safreen dibadda iyaga oo aan haysan ogolaansho gaar ah ama baahi loo qabo in la karantiilo markay yimaadaan, laga bilaabo Noofambar 1.
Wadanku waxa uu dabciyay xannibaadihii ba'naa ee uu saaray xuduudaha caalamiga ah maanta, taas oo u oggolaanaysa qoysas badan in ay dib u midoobaan ka dib ku dhawaad ​​600 oo maalmood oo ay kala maqnaayeen iyo in ay kicisay muuqaallo qiiro leh oo ka dhacay garoomada diyaaradaha ee Sydney iyo Melbourne.
Talaabadan ayaa timi inta badan Australia ka beddelaya waxa loogu yeero COVID-eber istiraatiijiyadda maaraynta masiibada oo u wareegta la noolaanshaha fayraska iyadoo lagu jiro dadaal tallaal oo ballaaran. In ka badan 77% kuwa 16 iyo ka weyn ee dalka 25.9 milyan ah ayaa helay labada tallaal ee jabka ilaa hadda, wasaaradda caafimaadka ayaa tiri.
Dowladda Australiya waxay la timid mid ka mid ah jawaabihii ugu adkaa ee masiibada, iyadoo xirtay xuduudaheeda caalamiga ah 18 bilood ka hor. Muwaadiniinta iyo dadka ajaanibka ah ee socdaalka ku joogaba waxa laga mamnuucay inay dalka soo galaan ama ka baxaan iyagoon wax ka-dhaafis ah lahayn. Talaabadan ayaa kala saartay qoysaskii iyo asxaabtii, taasoo ka dhigtay dad badan oo Australiyaanka ah inay awoodi waayaan inay ka qaybgalaan munaasabadaha muhiimka ah, aroosyada ama aaska.
Horaantii Isniinta, duulimaadyadu waxay ka imanayaan Singapore iyo Los Angeles ayaa markii ugu horeysay ka degay Sydney, Australia. Rakaabkii imanayay waxay sheegeen in socdaalkoodu ahaa "wax yar oo cabsi leh oo xiiso leh" waxayna ku tilmaameen dareenkii ugu dambeeyay ee ay ku noqon karaan guriga wakhtigan oo dhan ka dib "mid dhab ah."